Packing indandatho - China Wenzhou Dongyi Imishini
Gasket indandatho & uwoyela bushelelezi indandatho
Ixhuma induku inhlangano
Gasket indandatho & uwoyela bushelelezi indandatho (Wiper tetifundvo)
inkampani yethu ihlanganisa anhlobonhlobo metallic futhi okungezona metallic izinto futhi ezihlukahlukene imiklamo ukuhlangana eziningi izidingo nokupakisha ejwayelekile futhi labo izinto ezithile ngokuqondile nangokusuka eziyinkinga. Ububanzi izinto isebenzisa yenkampani yethu ayatholakala kuyo yonke neluhla lolubanti lwetinsita nokupakisha izindandatho eyenzelwe ukubekwa uphawu unidirectional kanye ibhidi, ongaphakeme ingcindezi ukuzwakalisa negesi ingashiswa uphawu. Lokhu kuhlanganisa ngesivinini futhi ophezulu izindandatho, kanye isemishi umbuthano kathathu imiklamo. Ba ...
inkampani yethu ihlanganisa anhlobonhlobo metallic futhi okungezona metallic izinto futhi ezihlukahlukene imiklamo ukuhlangana eziningi izidingo nokupakisha ejwayelekile futhi labo izinto ezithile ngokuqondile nangokusuka eziyinkinga.
Ububanzi izinto isebenzisa yenkampani yethu ayatholakala kuyo yonke neluhla lolubanti lwetinsita nokupakisha izindandatho eyenzelwe ukubekwa uphawu unidirectional kanye ibhidi, ongaphakeme ingcindezi ukuzwakalisa negesi ingashiswa uphawu. Lokhu kuhlanganisa ngesivinini futhi ophezulu izindandatho, kanye isemishi umbuthano kathathu imiklamo.
Single oyibamba uphawu izindandatho / ngazimbili
Double oyibamba uphawu izindandatho / ngazimbili
Pressure full impumuzo Slots
Olandelayo: uwoyela bushelelezi indandatho
3mm Ukuminyanisa Springs
Ashintshekayo negesi Spring
China Flat Ikhoyili Big Ukudonsa Force Spring
Ikhoyili Ukuminyanisa Spring
Ikhoyili Springs Ukuze Sofa
Kokucindezela Ikhoyili Spring
Down Ukuvula negesi Spring
Flat Ikhoyili Big Ukudonsa Force Spring
Lashukumisa Steel Spring Ukuze Slap Band
Negesi Spring Ukuze nezitulo Office
Gym Izinsiza kusebenza Spring
Hydraulci negesi Spring
Elikhulu Ikhoyili Springs
Lockable negesi Spring / Ukukhiya negesi Phakamisa
Asongwe lashukumisa Steel Spring Ukuze Slap Band
Kuvunguza Amandla Spring
Spring Buyisela Valve
Steel Spring Ukuze Slap Band
Amaphaphu Ikhoyili Springs
Toy Ukuminyanisa Spring
PTFE mpintsha indandatho
Ukubheka mpintsha indandatho
uwoyela bushelelezi indandatho
No.12 Gangsheng yagibela, Konggang okusha Area, Longwan District, Wenzhou City
Isicelo futhi wathola reciprocatin ...